“अमिताभको दिमागमा केही छैन” – Etajakhabar
“अमिताभको दिमागमा केही छैन”
काठमाडौं, ३ असोज- यो कुनै सामन्य नागरिकले भनेको अभिव्यक्ति होइन । भारतका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मार्कण्डेय काटजूले दिएको अभिव्यक्ति हो ।
काटजूले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अमिताभ बच्चनको दिमागमा केही छैन । तर, मिडियाकर्मी उनको प्रशंसा गर्छन् । मलाई सन्देह छ, उनको दिमागमा सायदै केही छ ।’
काटजूले यति मात्र लेखेका छैनन् । उनले यसलाई थप व्याख्या गर्दै फेसबुकमा अर्को पोस्ट पनि गरेका छन् । दोस्रो पोस्टमा काटजूले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रस्ट्याएका छन् ।
‘हाम्रा शासक पनि भारतीय जनतालाई शान्त राख्न उनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । रोमन शासक भन्छन्– यदि तपाईं जनतालाई रोटी दिन सक्नुहुन्न, उनीहरूलाई सर्कस दिनुहोस् ।
हाम्रा फिल्म पनि सर्कसजस्तै छन् । हाम्रा शासकले मानिसलाई रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, भोज, राम्रो शिक्षा दिन सकेका छैनन् र उनीहरूले फिल्मको प्रयोग गरेका छन्,’ काटजूले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कार्ल माक्र्सले भनेका थिए कि, जनसमुदायका लागि धर्म अफिमजस्तै हो । त्यसलाई शासकले ड्रग्सका रूपमा प्रयोग गरेर शान्त राख्छ । शासकको यो प्रवृत्तिका कारण जनताले विद्रोह गर्न पाउँदैनन् । धर्म त एउटा मात्र ड्रग्स हो, अरू ड्रग्सहरू फिल्म, मिडिया, क्रिकेट, ज्योतिष विज्ञान, बाबा आदि हुन् ।’
काटजूको यो पोस्ट भारतमा भाइरल भएको छ । केहीले उनको समर्थन गरेका छन् भने केहीले उनको विरोध गरेका छन् । काटजूले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अमिताभ बच्चनका फिल्म पनि देव आनन्द, शम्मी कपुर तथा राजेश खन्नाका फिल्मजस्तै ड्रग्स हुन्, यस्ता फिल्मले मान्छेलाई भरोसावाला समयमा लैजान्छन् । शासकलाई पनि यी फिल्मको आवश्यक पर्छ किनकि यसकै कारण जनता शान्त रहन्छन् ।’
काटजूले अमिताभ बच्चनबारे थप लेखेका छन्, ‘एउटा राम्रो अभिनेता हुनुबाहेक अमिताभमा के छ ? के उनले देशका ठूला समस्याको हलका लागि कुनै वैज्ञानिक सुझाब दिएका छन् ? छैनन् । समयसमयमा उनी मिडियामा आउँछन् र ज्ञान तथा प्रवचन दिन्छन् । कयौँपटक उनलाई राम्रो काम गरेको देखाइन्छ । तर, जब मानिससँग मनग्य पैसा हुन्छ, यस्तो कसले पो गर्न सक्दैन ?’नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
Posted on: Monday, September 19, 2016 Time: 9:54:40
बिमा कुमारी दुरा कोरोनाकै कारण अमेरिकामा रहेकी छोरीको हालतलाइ सम्झिदै भईन भाबुक
-10063 second ago
-2108 second ago
-1493 second ago
-395 second ago